Handsome Tattoos - Yakakwana Ichokwadi Tattoo Pfungwa | Kunyora
Handsome tattoos ane chaizvo chaizvo apedza
Susana godoy | | Body Art
Nekuti nyika yetattoot inogona kuve akasiyana kwazvo. Zvirinani nenzira iyi nekuti izvi zvinoreva kuti fungidziro uye zvinonaka zvinogara zvakabatana. Nhasi tinokuratidza zvimwe nyoro nyoro izvo zvine hwaro hwakakura hwechokwadi. All mumwe basa rehunyanzvi paganda rako!
Kana imwe neimwe yetattoos yatove, pasina kupokana zvakatonyanya mune ino kesi. Izvo zvakanyanya kusarongeka ruzivo zvinouya pamwechete izvo zvinoita kuti iwe ufunge kuti hazvisi chaizvo a mufananidzo wakanyorwa. Tarisa uone uye uone kuti maziso ako anotendera kuti uone.
1 Akanyatsoita akanaka matattoos
1.1 Kumeso nyora
1.2 Matanho emhuka
1.3 Nzvimbo nyora
1.4 Biomechanical nyora
1.5 Tattoos nezvinhu
Akanyatsoita akanaka matattoos
Tinoda zvigadzirwa zvechokwadi uye 3d nyora. Iyo yakasarudzika mhedzisiro iyo ichapa yega yega yemifananidzo iyo yatakasarudza yakawedzera hupenyu kupfuura isu zvatingafunge pakutanga. Kana iwe uchitsvaga mamwe mazano, heino unayo.
Mukati mematoto akanaka uye echokwadi, isu tinofanirwa kuratidza iyo kumeso nyora. Pasina kupokana, ndeimwe yesarudzo dzakanakisa. Pano iwe unogona zvakare kusarudza akasiyana akasiyana magadzirirwo. Vanhu vazhinji vanosarudza kupfeka isingazivikanwe kumeso uye akasiyana siyana pairi. Asi vamwe vanhu vazhinji vanofarira kuunza vaimbi vavanoda kana hama. Ehezve, ita shuwa kuti unaye akakodzera tattoo mugadziri wedhizaini yakadaro. Haizove nguva yekutanga kuona mamwe maatatoo ezvese asi echokwadi!
Imwe yemafungiro makuru atinawo pakati peakanaka maTatoo mhuka dzematoto. Pakati pavo, zvakaringana kuti isu titange kutsvaga ese marudzi ezvipembenene kuti aoneke. Mune ino kesi, ini handina kusarudza chero dandemutande, asi nyoka inopinda mukati meganda uyezve, bhiza rakanaka. Muzviitiko zvese izvi, kwechokwadi kunopfuura zviripo uye mavambo akabatanidzwawo mazviri.
Zviitiko kana nzvimbo dzakatorwa kubva mumabhaisikopo zvinogona zvakare kuve protagonist yeakanaka tattoo. Ndicho chikonzero nei vanhu vazhinji vachitendeukira nyora dzine nzvimbo dzakakosha kana kuvayeuchidza nezvehumwe ruzivo. Kana paine guta rawakashanyira uye usinganeti kuzviita, pamwe inguva yakanaka yekuzvinyora paganda rako. Zvakare maTattoo anomiririra mabasa ehunyanzvi ari kudiwa zvakanyanya, chero bedzi aine hukuru chaihwo.
Ehezve, kana tikataura nezvazvo kwechokwadi kuitika mumatato, hazvibviri kusataura nezve biomechanical tattoos. Nzira yekuti michina ipinde mumuviri wedu uye kuti isu tiiratidze nenzira yakavanzika. Iyo yakabvaruka ganda mhedzisiro ndeimwe yeakanyanya kukosha ekugadzirwa kwakadai Musana uyezve maoko kana maoko ndiyo nzvimbo dzakakosha dzekupfeka nyora yeiyi sitaira. Ehe, makumbo kana tsoka hazvisi kuzosiiwa kumashure.
Sezvo pane misoro mizhinji yatinayo, hazvisi nyore nguva dzose kusarudza tattoo yakatarwa. Iye zvino tava kunzwisisa vanhu vanotakura zvinopfuura imwechete kana zviviri! Unogona kugara uchisarudza zvinhu, izvo zvakare zvinoda chiratidzo chikuru. Iwe unofarira mimhanzi here? Ipapo hapana chakafanana ne gitare kana chinyorwa chemimhanzi. Kana iwe uchida iko kubatana pakati pedenga nepasi, saka sarudza musuwo unoshamisa manyorerwo.
Chero ipi sarudzo inosarudzwa, zvinogara zvichidikanwa kuve nehunyanzvi hukuru, senge isu vatinopa kwauri nhasi. Nzira yekupfeka yakanyanyisa, yakatakurwa nezvine chirevo uye inogara iri paganda redu. Ndezvipi zvimwe zvatinga kumbire?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Tattoos » Body Art » Handsome tattoos ane chaizvo chaizvo apedza
MaHawaiian tattoos, nhoroondo yavo uye zviratidzo zvavo zvikuru
Glyph tattoos kuunganidzwa: dziviriro uye simba rakasanganiswa muganda rako